तराखोलामा जडिबुटी उत्पादनमा लगानी::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, ७ साउन – तराखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको जनएकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जडीवुटी खेती विस्तार तथा भण्डारण कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बागलुङको २० लाख अनुदान र सहकारीको ६ लाख रुपयौँ गरी २६ लाखको लगानीमा जडीवुटी खेती विस्तार तथा भण्डारण सुरु भएको कार्यालयका नायव सुब्बा नारायणराज सापकोटाले जानकारी दिए । सहकारीका शेयर सदस्यहरुले तारखोलामै ३ हजार केजी सतुवा, ४ हजार केजी चिराईतो, ४ हजार केजी लौठसल्ला उत्पादन गरेका छन् । झण्डै १० हजार केजी जडिबुटी उत्पादन गरिसकेका उनीहरुले अझै उत्पादन बढाउने तयारी गरेका छन् । उत्पादन बढेअनुसार प्रसोधन र निर्यातको लागि आवस्यक सहयोग खोजीरहेका छन् ।
चिराईतोलाई बिभिन्न रोग विरुद्धको औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ । जडिबुटी क्रिमिनासक, ज्वरान्तक, स्वर बसेको र खानामा रुची बढाउने जस्ता समस्याका लागि औषधि हु्न्छ । ज्वरो घटाउने, औलोमा लाभदायक र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटाउने काममा पनि यी जडिबुटी उपयोगी हुन्छन् । लौठसल्लाले भने मानिसको छाती सम्बन्धी रोग निको पार्न र पाठेघरको क्यान्सर बिरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । जडिबुटी बिकास अन्र्तगत ५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि डिभिजन वन कार्यालयले १५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । पाण्डवखानी, रमुवा, बञ्चधारा लगायतका सामुदायिक वनमा पनि जडिबुटीको उत्पादन अधिक हुन्छ ।
ती स्थानमा पनि सतुवा, चिराईतो, लोठ सल्ला लगायतका जडिबुटी पाइन्छ । ओखर र तेजपत्ताबाट पनि बिभिन्न प्रकारका औषधि बनाउन सकिने भएपछि किसानले घरघरमा पनि बिरुवा रोप्न थालेको स्थानीयले बताए ।